Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ United States Weston McKennie Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi nke Weston McKennie na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezinulo, enyi nwanyi / nwunye ka o buru, Ugbo ala, ndu ndi mmadu, ihe bara uru na ndu ndi mmadu.
Ọ bụ akụkọ ndụ dị mkpirikpi nke onye egwuregwu bọọlụ America. Lifebogger malitere site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama. Iji mee ka ị nụrụ ụtọ ọdịdị Weston McKennie na-emetụta ndụ, nke a bụ nchịkọta ihe atụ nke ndụ ya na ọganihu ọrụ ya.
Akụkọ banyere Weston Mckennie. Site na nwata rue na ama.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọdịdị ya na midfield na ike ichebe. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole gụrụ akụkọ ndụ ya, bụ nke na-atọ ụtọ. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Weston McKennie Storymụaka Akụkọ:
Maka ndị na - ebido ụzọ bio, aha ya bụ Kenny. Weston McKennie mụrụ na 28th nke August 1998 na obodo Little Elm na steeti Texas, USA. A mụrụ ya nne ya, Tina na nna ya, John. Ndị mụrụ ya dị ka afọ 60.
Zute nne na nna Weston McKennie.
Weston McKennie Ezigbo ezinụlọ:
Dika ikwesiri ighota, Kenny bu onye Afro-American. N'ezie, ị nwere ike nyochaa nkwupụta ahụ site na ịmụ foto nke ndị mụrụ ya n'ebe ahụ. Ọzọkwa, ụda olu obodo Texan bụ ndo niile nke Yankee. Kedu ihe ọzọ ị ga - achọ iji gosipụta agbụrụ ezinụlọ ya?
Ọ bụ onye bonafide nke Texas.
Afọ Weston McKennie Na-eto Eto:
Nwa okorobịa Kenny nọrọ afọ atọ mbụ nke nwata ya na Texas toro na nwanne nwoke nwoke tọrọ ya John na nwanne nwanyị. Ka ọ na-erule oge McKennie dị afọ 6, ezinụlọ ya kwagara Kaiserslautern na Germany mgbe papa ya guzobere na Ramstein Air Base dị nso.
Ee, ị gụrụ nna nna midfielder bụ onye ọrụ America. Ya mere, ezinụlọ McKennie nwere ihe niile achọpụtara. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ndị McKennie nọ na nke ka njọ n'ezinụlọ etiti ma nwee obi ụtọ n'oge ọ bụ nwata.
Enweghị mgbagha eziokwu ọ bụ na ọ nwere obi ụtọ n'oge nwata.
Egwuregwu bọọlụ bidoro na Weston McKennie:
Ọ bụ na Germany ka Kenny hụrụ bọọlụ n'anya wee bụrụ onye otu ọgbakọ FC Phönix Otterbach dị mgbe ọ dị afọ isii. N'ụzọ na-akpali mmasị, o meriri ihe mgbaru ọsọ 8 na egwuregwu mbụ ya maka otu ahụ wee nweta nkwalite ka ya na nwata nwoke dị afọ asatọ. Uzo nke umuaka umuaka na-eto eto si choputa ya, bọọlụ bụ egwuregwu iji nwee ọ enjoyụ.
Lee ka kaadị njirimara ya siri yie oge ahụ.
N'ezie, ọ maghị banyere mmetụta dị ukwuu egwuregwu ahụ nwere ike inwe na ọdịnihu ya ruo mgbe USMNT bịara n'obodo, maka enyi enyi megide Poland na Kaiserslautern na 2006. Ndị nne na nna McKennie mere ka o jide ohere ahụ site na iji foto na akụkọ ifo Landon Donovan were ya Carlos Bocanegra.
O nwere ihe ùgwù nke izute akụkọ akụkọ USMNT Landon Donovan na Carlos Bocanegra dịka nwatakịrị.
Afọ Weston McKennie nke Oge Ochie na Ọrụ Nlekọta:
Mgbe ezinụlọ Kenny laghachiri na Texas, ọ nwara ijikọ bọl na bọọlụ America enweghị isi. Ka oge na-aga, ọ lekwasịrị anya na bọl ma sonye na FC Dallas Academy na-enweghị isi na 2009. Ka ọ na-ebili site na klọb ahụ, ọ na-ebili site na otu ndị ntorobịa mba USA.
Na-ebili site na YNT.
Egwuregwu McKennie dị nsọ na FC Dallas agụmakwụkwọ ntorobịa, ebe ọ nọrọ afọ asaa na-etolite n'otu n'ime atụmanya kachasị mma nke klọb. Iji kpue ya niile, mgbalị ya n'oge ikpeazụ ya na klọb, mere ka a na-asọpụrụ Central Conference Player of the Year.
Weston McKennie Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Na 17, Kenny nọ n'okporo ụzọ dị mkpa nke mkpebi ọrụ dị mkpa. FC Dallas nwere mmasị ịbanye na ya ma nwee onyinye nke kọleji zuru oke na Mahadum Virginia. Na mgbakwunye, Bundesliga n'akụkụ Schalke chọsiri ike ịkpọga ya na Europe. Onye na-eto eto na ndị mụrụ ya nwere oge siri ike ịchọpụta ihe kacha mma maka ya tupu ha ekwenye na ọ ga-anabata onyinye sitere n'aka Schalke.
Emere m mkpebi ziri ezi, anaghị m akwa ụta maka ya ma ọlị. Agbanyeghị na ọ dịghịrị m mfe ịhapụ FC Dallas, ị ga-echebara echiche, m ga-eleghachi anya azụ n'ime afọ 10 ma chọọ ka m gabiga Europe? Ọzọkwa, ọ dị m ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịme ya ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịlaghachi na MSL ma kpọọ egwuregwu dị elu. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị bụ nwata ị banye na MLS ma nwaa ị banye Europe, ị nwere ike ghara ịdị njikere. ”
N’ileghachi anya azụ, anyị kwenyere na ọ mere nhọrọ ziri ezi.
Weston McKennie Biography - Bilie Iji Maara Aha Akụkọ:
N'ụzọ dị mma, nzọ ahụ ghọrọ ihe na-akwụghachi ụgwọ, ebe ọ bụ na Kenny nwere mmalite mmalite nke ndụ na ndị ntorobịa Schalke. O mere ndi mbu ndi otu ya na May 20, 2017 wee gosiputa onwe ya dika ihe bara uru nye ndi otu. Ọsọ ọsọ gaa n'oge edere mpempe akwụkwọ a na akụkọ nwata na akụkọ ndụ nwata Weston McKennie, onye na-etiti midfielder mbinye ego na Juventus.
Mgbe ọ bịarutere na klọb ahụ, ọ banyere akwụkwọ akụkọ ihe mere eme dị ka onye ọkpụkpọ America mbụ na Juventus na Serie A nke ise. The Old Lady bụ otu n'ime klọb kachasị elu nke Europe na kpakpando dị ka Cristiano Ronaldo na Paul Dybala. O doro anya na McKennie ga-achọta ohere ọ ga-eji mee nkwekọrịta ahụ na-adịgide adịgide. Kedu ụzọ ọbụla ihe siri kwụrụ ya na Itali, ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Kenny na-ekpori ndụ na Turin, ebe ọ na-amụta ihe site na nke kacha mma.
Ọnye na-bụ Weston McKennie Dating?
N'azụ ụfọdụ ezigbo midfielder mara mma bụ ihe ihunanya n'oge gara aga. Dịka eziokwu, anyị mere nke ahụ. Ka o sina dị, McKennie na-enwe mmekọrịta na-acha odo odo. Aha ya bụ Laura Rypa.
Weston Mckennie na enyi ya nwanyị mbụ, Rypa.
O yiri ka di na nwunye enweghi ike igbanwe, ha nwere ịhụnanya miri emi na ọtụtụ ihe ọnụ. Agbanyeghị, ha jere ụzọ dị iche iche wee hichapụ foto Instagram nke ncheta ha nwere ọnụ. O doro anya na onye na-egwu egwu na-agagharị. Agbanyeghị, ọ dị ka ọ chọghị ịbata ọnya n'oge na-adịghị anya.
Weston McKennie Ndụ Ezinụlọ:
Ọ na-ewe ọtụtụ mmadụ ịtụnanya iji zụlite nwoke dị mma Kenny. Ndị mmadụ n'otu n'otu bụ ezinụlọ. Anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara nne na nna Weston McKennie. Anyị ga-emekwa ka eziokwu banyere ụmụnne ya na nwanne ya dị Ebe a
Banyere Weston McKennie Nna:
John bụ aha nna nna nke midfielder. Dịka e kwuru na mbụ, ọ na-abụbu onye ọrụ, ọkachasị onye sajent mkpara. Ekele ya, McKennie na-ewu ewu na ndị ọrụ. Ọ na-aga n'ekwughị na nna Kenny na-abụ nna na-akwado nkwado. McKennie ga-enwe obi ụtọ inwe ya maka nna.
Anyị anaghị egwu egwu mgbe anyị kwuru na ọ na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ.
Banyere Weston McKennie Nne:
Tina bụ aha mama onye ọkpụkpọ. Ọ na - enyere aka ịme mkpebi dị mkpa n’ezinaụlọ oge ọbụla di ya chọrọ ya. N'ezie, ọ bụ Tina họọrọ Germany karịa Alaska mgbe nhọrọ di ya maka ịghachite ọdụ ndị agha rutere. Ọzọkwa, Tina kpọbatara McKennie na-eto eto na onye nchịkwa nke FC Phönix Otterbach ebe ọ malitere njem ya na football.
Weston Mckennie ya na nna ya, nne ya, nwanne ya nwoke na nwanne ya nwoke.
Banyere ụmụnne nwanne Weston McKennie:
Igwe bọọlụ nwere naanị ụmụnne abụọ. Ha gụnyere nwanne nwoke nke okenye John na obere nwanne nwanyị a ma ama. Nwanne ya nwoke bu onye oku oku nke nwere mmasi na ala. Na mgbakwunye, o nwere nwunye nwere nwa nwanyị. Lee aha nwunye ya na ada ya n’isiokwu na-esonụ.
Foto a na-adịghị ahụkebe nke Weston McKennie na nwanne ya nwoke nke okenye, John.
Banyere ndị Weston McKennie:
Ewezuga ezi na ulo nke Kenny, o nwere nwa nwanne nne amara aha ya bu Naomi na nwanne nwanne, Mimi. Ha bụ ada na nwunye (n'otu n'otu) nwanne ya nwoke nke okenye. Anyị ka nwere nchekwube banyere ị nweta arịrịọ anyị maka nkọwa gbasara ndị nne na nna ochie bọọlụ mezuru. Ọzọkwa, anyị chọsiri ike ịmata ndị nwanne nna nna ya, nwanne nne ya, nwanne ya na ndị ikwu ya bụ.
Weston McKennie Ndụ Nke Onwe:
Kenny bụ onye ị hụrụ n'anya ịbụ enyi. Onye maara nke bọl nwere ikike na mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke mere ka ọ bụrụ ndị enyi ya. N'ezie, ọ na-enwe ọ joụ, hụrụ nri n'anya ma ọ naghị esiri ya ike ịmụ asụsụ ọhụrụ.
Ego ole ka masịrị bọọlụ nwere ezigbo mmadụ?
Na mgbakwunye, ọ maara otu esi eme mkpọtụ siri ike. Ọ hụrụ ịha nhatanha n'anya, kpọọ ikpe na-ezighi ezi asị, wee buru otu oge 'Ikpe ziri ezi maka George' na-asọpụrụ George Floyd dị egwu. Ọzọkwa, nwa afọ Texas enweghị nsogbu ịkọkọrịta nkọwa gbasara ndụ onwe ya na nke onwe ya. Otú ọ dị, ọ na-eji nwayọọ eme otú ahụ n'ihi na ọ ghọtara mkpa imeru ihe n'ókè.
Weston McKennie Web Life:
Kere nke a, ị na-egwuri egwu n'otu n'ime egwuregwu ise kachasị elu n'ụwa, na-enweta euro 2.95 kwa afọ, ma nwee Adidas. Kedu ihe ga-akarị ike ịzụrụ ikike gị karịa njem njem Mars na Elon Musk's Space X?
Nabata ụwa nke McKennie. Ọ bụ naanị 22 mana ọ nwere nde 3 nde Euro ma nwee ike ị nweta ihe ọ bụla ọ chọrọ. Arsgbọ ala, ụlọ, aha ya. O nwere ha niile. Nanị nsogbu dị na ya bụ na ọ naghị enwe oge zuru ezu iji kpori ndụ akụ na ụba ya. Bọọlụ bụ egwuregwu ịgba mbọ na Kenny nwere ihe dị ka afọ iri iji nọrọ na pitch ma nweta ọtụtụ ihe.
Kenny gosipụtara otu n'ime ụgbọ ala ya ka ọ na-akwado Adidas.
Eziokwu Banyere Weston McKennie:
Ekele, ị mere nke a. Iji mechie akụkọ a na Weston McKennie na akụkọ ndụ ya, ebe a bụ ihe amachaghị ma ọ bụ eziokwu banyere ya.
Eziokwu # 1 - Salary and earn per sekọnd:
Kwa Afọ :: € 2,950,000
Ọnwa kwa: € 245,833
Kwa Izu: € 56,644
Kwa :bọchị: € 8,092
Kwa elekere: € 337
Nkeji nkeji: € 6
Sekọnd: € 0.10
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Weston McKennie's Bio, nke a bụ ihe ọ rụpụtara na Juve.
Nwa amaala Texas ga-enye anyị ihe ngosi ma ọ kwenyere na ịdị adị nke ikike karịrị ma ọ bụ. Agbanyeghị, nsogbu ndị ahụ na-amasị ya ịbụ onye kwere ekwe, ọkachasị Onye Kraịst.
Eziokwu # 3 - FIFA 2021 Rating:
Might gaghị enwe ike ịghọta otú Weston McKennie si dị egwu ruo mgbe ị ga-ahụ ọkwa FIFA nke 76/85. Olileanya, ndị isi maara ya na nyocha dị elu dị nso.
Nkwalite bụ aha njirimara, ndidi bụ paswọọdụ.
Eziokwu # 4 - Nne Na - ejide Ya:
Mgbe McKennie na-akwaga Schalke na nke mbụ ya, ndị mụrụ ya, ọkachasị nne ya, nyere ya ịdọ aka ná ntị siri ike na ọ gaghị anabata omume ọ bụla nke diva sitere na kpakpando bọọlụ ka ọ na-atụle elu Bundesliga. Nke a na-akọwa ihe kpatara McKennie dị umeala n'obi.
“Amaara m kpọmkwem onye m bụ na ebe m si bịa. Ọzọkwa, Mama m ga-eme mkpọ m ọ bụrụ na amalitere m ịkpa àgwà na mberede dị ka kpakpando. ” O kpughere.
Nchịkọta Lifebogger na-egosiputa azịza nye ajụjụ ndị na-agba ọsọ ndụ.
NTKWU NDOG BIOGRAPHICAL
Aha zuru ezu: Weston McKennie.
aha otutu: Otu Nwoke.
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị 28 nke Ọgọstụ 1998.
Ebe amụrụ onye: Obodo Little Elm na steeti Texas, USA.
Ndị nne na nna: John na Tina.
Ụmụnne: John na otu nwanne nwaanyị.
Ogo n'ogo: 6 ụkwụ, m Inch.
Ogologo na cm: 185 cm.
Enyi / nwunye ka: NA NA
Children: NA NA
Net uru: 3 Nde Euro.
Daalụ maka ịgụ ihe mmụta a na akụkọ Weston McKennie na akụkọ ndụ nwata. Anyị na-atụ anya na akụkọ ndụ dị egwu nke Texan na Courtlọikpe Juventus emeela ka ị kwenye na mkpa ọ dị ime mkpebi ziri ezi.
Dị nnọọ ka nne na nna Weston McKennie nyeere ya aka ịhọrọ ịkwaga Europe karịa onyinye ndị ọzọ na-atọ ụtọ na steeti. Ọ dị anyị mkpa n'oge a ịja ndị nne na nna ọkpụkpọ ahụ mma maka nkwado ha na ọrụ ya n'okwu na omume.
Na lifebogger, anyị na-anya isi n'inye akụkọ nwata na akụkọ ndụ eziokwu na izi ezi na izi ezi. Ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya, mee nke ọma ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụ hapụ okwu.
Bọchị agbanwee: Disemba 21, 2020
Ifiedbọchị agbanwee: November 23, 2020
Bọchị agbanwee: Disemba 2, 2020